स्वयम्भूको सुन्दरता (फोटो फिचर) – live 60media
स्वयम्भूको सुन्दरता (फोटो फिचर)
काठमाडौं – लकडाउन, मनसुन र स्वयम्भू पश्चिमा वायुका कारण नेपालमा गत हप्तादेखि मनसुन सुरु भएको छ । वर्षा पछि खुल्ने काठमाडौंका आकाश, अक्कलझुक्कल देखिने इन्द्रेणी र बादलका आकृतिले वातावरण उमंगले भरिदिन्छ ।
बुधबार सन्ध्याकालिन समयमा दर्केको पानीले काठमाडौंको स्वयम्भूमा बेग्लै चमक ल्याइदियो । पानी परेर एकैछिन रोकिदाँ मन्दिर सुनौलो रंगमा धपक्क बलेको थियो भने मनसुनी बादलले त्यसमा प्राण भर्ने काम गरेको थियो ।
तस्वीरमा हेर्नुहोस् स्वयम्भूको स्वर्णीम सुन्दरता ।
← ५९ करोडका मालिक सुशान्त राजपुतको नाममा अन्तरिक्षमा जग्गा ! उनका गाडी, मोटर साइकल भनेपछि हुरुक्कै हुने उनि संग के के छन् ?
दबंगका निर्देशक कश्यपले बलिउडको पोल खोलेः भने, ‘ सलमान खानको परिवार विषालु सर्पको टाउको’ उनीहरुको धम्कीले धेरैले आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन ! सलमान खान र परिवारले यस्तो सम्म गर्ने रहेछ भित्रभित्रै खुल्यो पोल ! →